Sponsor ဆိုတဲ့စကားလုံးအတွက်လိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့ ရေးလိုက်တဲ့ထားထက်ထက်ရဲ့စာလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါအုံး…. – Sport Gaber
Sponsor ဆိုတဲ့စကားလုံးအတွက်လိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့ ရေးလိုက်တဲ့ထားထက်ထက်ရဲ့စာလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါအုံး….
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ထားထက်ထက်ဟာ တောထဲမှာ တော်လှန်ရေးအတွက် အလှူငွေကောက်ခံနေတာပါနော်။ အလှူခံထားတဲ့ငွေတွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့ ခဏခဏ သတင်းတွေထွက်နေတာကြောင့် ထားထက်ထက်ခမျာ စိတ်သောက ရောက်နေရပါတယ်နော်။ မနာလိုသူများမှ ထားထက်ထက်ကို sponsor ယူတယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့ကြပြန်ပါပြီနော်။
” ရည်းစားနဲ့ ပြတ်တာ လူသိရှင်ကြားရှင်းရမယ့် ကိစ္စလို့ကို မထင်ပါဘူ…Sponsor ဆိုတဲ့ စကားလုံးအတွက် ဒီစာစုကိုလိပ်ပြာသန့်သန့် နဲ့ ရေးလိုက်ပါတယ်…၁၊ ကျွန်မတို့ အချင်းချင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ၄ နှစ် ကြာ ရည်းစား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…၂၊ ငွေကြေး ၊ တိုက်ခန်း ၊ ကား ၊ လက်ဝတ်ရတနာ စတဲ့ တန်ဖိုးကြီး လက်ဆောင်ပစ္စည်း တခုမှ မယူခဲ့ဖူးပါ…၃၊ နှစ်ဖက် သဘောထား မတိုက်ဆိုင်တဲ့ အတွက် ၂၀၁၉ မှာ ကျွန်မဖက်ကနေပဲ စတင်ခွင့်တောင်းခဲ့ပြီးအေးအေးဆေးဆေး လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်…
၄၊ ဒီလိုခေတ်ကြီးမှာ မိန်းမ တယောက်ကို ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ဖို့ အခြားနည်း မစဉ်းစားတတ်ကြတာ အံ့ဩပါတယ်…၅၊ အခုလို တိုက်ခိုက်ခြင်း အပေါ် ကျွန်မ မဟုတ်တာ မလုပ်ထားတဲ့ အတွက် ကျွန်မ ရဲ့ လိပ်ပြာ သည် သန့်လျက် ၊ကြည်လျက် ၊ လင်းလျက်…ထားထက်ထက်30 August 2021″ လို့ ထားထက်ထက်မှ ပြန်ဖြေရှင်းထားပါတယ်နော်။
” ဥပုဒ်သီလဆောက်တည်ဖို့ ပေ (၄၀) ကျော်မြင့်တဲ့တောင်ပေါ်ကို အမြဲတမ်းသွားတတ်တဲ့ အသက် (၁၀၀) ကျော်အဖွား ဒေါ်မဲလှချေ “
ဓမ္မဘက်ကနေရပ်တည်ပြီး အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်က ဘဝမှာ အလွတ်လပ်ဆုံးအချိန်လို့ပြောလာတဲ့ CDM ဗိုလ်ကြီး…